Welcome to Aayaha Nolosha » MATAANO WAX WALIBA KU MIDOOBAY OO LAKALA GARAN LA’ YAHAY
MATAANO WAX WALIBA KU MIDOOBAY OO LAKALA GARAN LA’ YAHAY
March 3, 2019 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Gabdho walaalo ah oo lagu kala magacaabo Drs. Iyerusaalem Getaahuun iyo Drs. Qaalkidaan Getaahuun waa mataano muuqaalkooda iyo dhaqankooda lakala garanaynin, dadka badanaana ay isku qaldaan.
Waxay ku dhasheen kuna soo barbaareen magaalada Shaashamane ee dalka Itoobiya. Dugsiga hoose, dhexe iyo sare halkaa ay ku soo qaateen waxayna imtixaanka dugsi sare lagaga baxo ay keeneen isku dhibco.
Waxbarashadooda heer J aamacadeed marki ugu horreysay waxay ku soo qaateen Jaamacadda Hawaasa iyaga oo bartay maaddada Medical Laboratory Technology dhibco aad u sarreeya ayey keeneen.
Kaddibna waxay waxbarashadooda dhakhtarnimo ka barteen Hayat Medical College oo ku taallo magaalada Addis Ababa, markay ka qalinjabiyeen jaamacaddaasina waxaa lagu wada qoray Isbitaal ay dowladdu leedahay oo ku yaalla degmada Malkaa. Wakhti xaadirkannaa waxay furtay xaruun caafimaad oo ay ugu magac dareen ‘Xaruunta Caafimaadka Mataanaha”.
Waxa keli ah ee lagu kala saari karo markay kula joogaan ayey tiri hooyadood “midbaa xoogahaa aamusan midna wey qosol badan tahay balse wax kale oo lagu kala garan karo ma jirto.”
Inta badanna waxaa ay jecel yihiin iney isku dhar iyo isku kabo qaataan taasoo qofka aan aadka u garaneyn ku sii adkeyneyso inuu si fudud u kala saaro.
Waxayna dhakaatiirtaasi sheegeen dhibka keli ah ee ay la kulmeen inti ay noolaayeen ay tahay inaan saaxib rag ah ay lahayn maadaamaa qofka ay mid ka hesho tan kalana ka heleyso cabsi ay ka qabaan iney kalamhinaasaan awgood iney labadooduba xiriir la sameeysanin saaxibtinimada ragga.